Inona avy ireo fitaovam-pivarotana azonao soso-kevitra amin'ny fikarohana asa soratra Amazon?
Alohan'ny hampisehoanao fitaovana tsara sy ampiasaina ho ampiasaina ho an'ny fikarohana teny malaza Amazon, andao hanomboka amin'ny ampahany fahalalana. Indrisy anefa, ny Amazon dia tsy manambara na inona na inona fitsipika manokana na anton-javatra marina izay raisina amin'ny algorithm amin'ny alàlan'ny A9 - toy ny fitaovam-pikarohana lehibe toy ny Google, Yahoo, Bing, sns.Nefa izao no azontsika fantarina azo antoka. Araka ny fitsapana azo ampiharina vao haingana:
Ny fikarakarana ny teny fikarohana momba ny teny malaza Amazon dia hita indray amin'ny lalao (farafaharatsiny amin'izao fotoana izao). Midika izany fa tokony hanao izay tsara indrindra vitanao ianao mba hisorohana ny tsy firaharahiana manokana / maro, na fampiasana tranga ambany / ambony raha azo atao, indrindra raha ny momba ny teny keyword backend.
Eritrereto ny fanamafisana 250-marika vao haingana ho an'ny isa iray manontolo amin'ny teny fanalahidinao - chile compras. Mazava ho azy, tsy misy fetra henjana azo hamarinin'ny manampahefana ao Amazona. Na izany aza, dia tsara kokoa ny mijanona eo amin'ny toerana azo antoka ary manaiky ity toe-javatra ity.
Mitazona izany ao an-tsaina, izao no fotoana hampiseho aminao ny sasantsasany amin'ireo safidy notadiaviko ho an'ny fikarohana teny anglisy. Ity misy fijery fohy momba ny tsirairay hampiasaina mandritra ny famakafakana fikarohana lalina kokoa. Alefaso farafaharatsiny mba hanandrana izany. Ary mazava ho azy, dia ny anao ihany no manapa-kevitra hoe iza no haka ny vokatra lisitra fanatsarana.
1. Keyword Eye - fitaovana mahafinaritra hanampiana anao amin'ny fikarohana teny malaza Amazon. Ny Keyword Eye dia mibahana ao amin'ny tahirin-tsarimihetsika tena izy izay mandrakitra mihoatra ny iray tapitrisa isan-karazany soso-kevitry ny teny filamatra voatanisa miaraka amin'ny salan-karoka fikarohana mba hahalalanao mazava hoe iza amin'izy ireo no mety hahazo fandresena amin'ny teny fikarohana, ary mety ho sarotra ny hanafoana ny lisitry ny teny fototra ary fampifanarahana lava.
2. Kparser - Ity tranonkala an-tserasera ity dia afaka mahita haingana ny laharam-pandaharana fototra tsy maintsy mandresy sy ny fangatahana an-tserasera. Ny angon-drakitra dia nifamotoana nifototra tamin'ny antontan'isa fikarohana mivantana sy ny fivoarana farany momba ny fivarotana tsy amin'ny Amazon sy Ebay, fa avy amin'ny fikarohana tany am-boalohany tamin'ny Google sy Bing. Ny zavatra ratsy momba an'i Kparser dia ny mampalahelo fa ity sehatry ny rindrambaiko an-tserasera ity dia omena amin'ny alàlan'ny fidirana amin'ny alalana ahafahana mametraka ny fotony fotsiny.
3. Keyword Kiwi - dia fitaovana fikarohana tsara indrindra amin'ny Amazon, izay tena mahasoa indrindra ho an'ny fahatakarana lalindalina kokoa ny fikasan'ny mpanjifanao.Ampiasao ny tahirin-kevitra malalaka mifototra amin'ny angon-drakitra momba ny mpihaino anao, ny safidinao manokana ary ny fividianana fividianana ankapobeny - nivantana mivantana avy any Amazona, sy ny fivoaran'ny Google ary ny YouTube.
4. Asin Key - no sehatry ny fikarohana fikarohana farany izay tiako haseho anao anio. Anisan'ireo lafiny matanjaka indrindra, io fitaovana amin'ny aterineto an-tserasera io dia manana safidy maro isan-karazany amin'ny safidy tarihina atolotra ho an'ny fitaovana isan-karazany. Hamarino ny fahafahana manao fikarohana amin'ny teny fototra miaraka amin'ireto rafitra efa natsangana ireto: Amazon Product Listing SEO fitaovana, Advanced Keyword Tracker, ary ny fitafy soso-kevitry ny Keyword Suggestion. Mariho anefa fa ny sehatra fikarohana momba ny teny keyword Asin Key Amazon dia hanompo anao tsara raha tsy efa manana farafaharatsiny ny fahatakarana fototra momba ny SEO sy ireo fitsipika fototra amin'ny algorithm finday alalana.